Isixhobo Esiqingqiweyo Okufuneka Uyiqwalasele - Sichazwe Nge-Semalt
Iimephu zeGoogle ze-scraper yindlela entsha,. Ichonga idatha kumaphepha ewebhu ahlukeneyo kunye neemephu zeGoogle kwaye ifumana iziphumo kwifom ye-CSV ne-JSON. Unokujolisa kakuhle kwiiwebhsayithi zezoshishino, iinombolo zefowuni kunye needilesi ze-imeyili kunye nale nkonzo epheleleyo. Ezinye zeempawu zayo ezahlukileyo zixutyushwa ngezantsi.
1 - free no deposit required. Idatha ye-Scrapes kwiifom ezininzi:
Ngeemephu zeGoogle zithemba, unokukhupha idilesi, iikhowudi ze-zip, ukulinganiswa, ukulandelana, ukuhamba kwexesha, ixesha lokuvula, kunye namagama oshishino ngokufanelekileyo. Lo mbonakalo unceda ukuguqula idatha eluhlaza kwifomu ehlelekile kwaye usindise ixesha lakho namandla. Ukuba ukhathele ukuqokelela kunye nokwahlula idatha ngokuzenzekelayo kwaye unqongqo lwezakhono zokwenza iinkqubo, kufuneka uzame amabalazwe eGoogle ukuze uyenze umsebenzi wakho.
2. Ifumaneka ngeenguqu ezibini:
Ngokungafani nezinye iinkonzo eziqhelekileyo zokucoca, iimephu zeGoogle zepraper ziyafumaneka kwiinguqu ezimbini ezihlukeneyo: Inkqubo yesiGangatho kunye neDemo. Ukukhishwa kweedemo kukuvumela ukuba uzame le software kwaye ujabulele iinkonzo zayo ukuya kwiintsuku eziyi-15. Uhlobo lwayo oluqhelekileyo luya kubabiza i-$ 99 kwaye luvule iingeniso eziqhelekileyo kunye neempawu.
3. Iithagethi eziliqela zamakhasi nsuku zonke:
Enye yezona zinto zihluke kakhulu kwiimephu zeGoogle zincwadana kukuba ijolise kuma-webhsayithi angama-150,000 ngosuku kwaye ayikuhlawuli nto kule nkonzo. Esi sixhobo sikhulu kubo bobabini abaprogram kunye nabangewona program kwaye kwenza kube lula kubo ukuba bafake idatha kumaphepha amaninzi ngaphambi kokuba bathenge inguqulo.
4. Uncedisa amafomathi amaninzi:
Le khowudi ye-web scraper ephakamileyo okanye i-data extractor igcina ulwazi lwakho kwi-JSON, i-RSS kunye neFF ifom; unokuvula idatha efunwayo kwiifayile ze-Excel okanye ungenise ngqo kwi-Google Drayivu yakho.
5. Iyahambisana kwaye inokwethenjelwa:
Kukho inamba enkulu yokucoca idatha isofthiwe kunye nezixhobo ezingenakuxhasa ezininzi iiphequluli. Ngokungafani nokungenisa. Io kunye neKimono Labs, iGoogle i-maps scraper iyahambelana ne-Windows 7, i-Microsoft XP, i-Windows 8 ne-Windows 10. Ukongeza, ihambelana neGoogle Chrome, Firefox, ne-Internet Explorer kwaye inkonzo ethembekileyo.
6. Ubonisa iziphumo ngokuchanekileyo:
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokubeka umgangatho wedatha ngelixa utyunjwa, kufuneka uzame amabalazwe eGoogle. Le nkonzo ikuvumela ukuba uyibuke idatha kwaye ulungise zonke iiposiso ezincinane ngokwayo. Ukongezelela, kunika iinketho zokufaka iinkqubo ezahlukeneyo zophando kunye namagama angundoqo ngexesha elifanayo.
7. Imisebenzi ngokulula nangokulula:
Iimephu zeGoogle ze-scraper kulula ukuyisebenzisa kwaye unomsebenzisi obenomdla. Emva kokuba ukhethe uluhlu okanye ufaka igama elingundoqo kunye nendawo, kufuneka uqale ukukhangela kwaye ulinde iziphumo zakho ezimbalwa imizuzu. I-Google yedatha yedatha yedatha ifanelekile kuzo zonke iintlobo zamashishini kwaye yenze iifayile ezifanelekileyo ezifundwayo ze-CSV ngokukhawuleza.
8. Ukukhupha naphina na, nayiphi na ixesha:
Ungayisebenzisa le sixhobo kwi-smartphone yakho, iipilisi okanye inkqubo yekhompyutheni kwaye unokuyenza imisebenzi yakho naphi na, nayiphi na ixesha. Awunakukhathazeka ngeziphumo zayo. Esi sixhobo siza kunika ulwazi oluchanileyo kungakhathaliseki uhlobo lwefowuni oyisebenzisayo kwaye lufanelekile kuma-freelancers kunye nabathengisi. Unokwazi ukutshekisha iphepha eliphuzi kunye namaphepha amhlophe ngale nkonzo.